MediaLight Mk2 Eclipse 1m 6500K CRI 98 Laydh Nalal - Nalalka Nalalka ee MediaLight
Bogga ugu weyn MediaLight Mk2 Eclipse 1 Meter (Soo Bandhigida Kombiyuutarka)
Keydso ilaa $ 3.00 Save $ 3.00
wax soo saarka.waydayaasha.hoose_variant Maya (Dayax madoobaadka marhore wuxuu la yimid dimmer aan fogayn) - $ 29.95 Haa, kudar qalabka hago ee infrared iyo dimmer (+ $ 8.95) - $ 38.90 Haa, ku dar muuqaalka 'MagicHome WIFI dimmer' ee aaladaha iOS iyo Android, kuna habboon Alexa iyo Google Home (+ $ 9.95) - $ 39.90
Maya (Dayax madoobaadka horeyba wuxuu ula yimid dimmer aan fogayn) Haa, kudar kontoroolka fog ee infrared iyo hooska (+ $ 8.95) Haa, ku dar muuqaalka 'MagicHome WIFI dimmer' ee aaladaha iOS iyo Android, kuna habboon Alexa iyo Google Home (+ $ 9.95) Ku dar kontoroolka fog?
Laydhka Fiican ee Fiidiyowga Midab-Halis ah
Kaliya maahan helitaanka tallaalkaas saxda ah; sidoo kale waa hubinta in waxa aad shaashadda ka aragto ay yihiin dhab ahaan waxa dadka kale arki doonaan markay daawadaan shaqadaada. Taasi waa sababta aan ugu qaabeynay alaabteenna si sax ah maskaxda - sidaa darteed waxaad ku kalsoonaan kartaa in faahfaahin kasta oo mashruucaaga ah si sax ah loogu metelayo qalab kasta oo daawasho ah.
The Madoobaadka Mk2 1m wuxuu isku daraa CRI aad u saraysa iyo saxnaanta heerkulka midabka oo leh sahlanaanta iyo qaadista nidaamka nalka eexda eex ee ku shaqeeya USB-ga. Midab xasilloon oo midab leh iyo diirimaad deg-deg ah ayaa hubinaya in iftiinkaaga ku wareegsan had iyo jeer bartilmaameed yahay.
Dhammaan alaabooyinka taxanaha ah ee 'MediaLight Mk2 Series' waxay wadaagaan isla qeybinta awoodda 'D65 spectral power', iyagoo iska ilaalinaya arrimaha iswaafajinaya fikirka iyo hubinta nalalka joogtada ah ee la xakamayn karo. Dalbo MediaLight oo arag farqigaaga naftaada.
Faahfaahinta MediaLight Mk2:
Xaqiijin sare 6500K CCT (Heerkulka Midabka Isku Xidhan)
Tusmada Bixinta Midabka (CRI) ≥ 98 Ra (TLCI 99)
Midab xasillan oo diirran iyo diirimaad degdeg ah
USB 3.0 Awooda
Waxaa kujira dimmer PWM (kontoroolka fog waxaa lagu heli karaa qiime dheeri ah)
Fiiq oo ku dheji koollada dhejinta 3M ee saxda ah
Waxaa lagula taliyay dhammaan bandhigyada, oo ay ku jiraan Range Sare Dynamic Range (HDR)